नायिका जसिता गुरुङको आज जन्मदिन,कती बर्ष पुगीन त जसिता? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/नायिका जसिता गुरुङको आज जन्मदिन,कती बर्ष पुगीन त जसिता?
नायिका जसिता गुरुङको आज जन्मदिन,कती बर्ष पुगीन त जसिता?
काठमाडौ, जेठ ३ – आज चर्चित नायिका जसिता गुरुङको आज जन्मदिन परेको छ । आज अर्थात जेठ ३ गते उनको जन्म परेको हो । १९९६ मे १६ तारिखका दिन बेलायतमा जन्मिएकी उनि चलचित्र लिलिबिली बाट डेब्यु गरेकी हुन् ।
पहिलो चलचित्रबाट नै धेरै फ्यान कमाउन सफल भएकी जसितालाई बिहानै देखि शुभकामना दिनेको ओइरो लागेको छ ।अब उनि चलचित्र ‘एन्टी हिरो’ मा अनमोल केसीसंग देखिने भएकी छिन् । गतबर्ष चैत्रमा रिलिज भएको चलचित्र ‘लभ स्टेशन त्यसत सफल हुन भने सकेन।
अभिनेता भुवन केसीले मद्धा हालेपछि साम्राज्ञीले वकिलमार्फत पठाइन् यस्तो मौखिक जवाफ